An-kitsim-po | NewsMada
Par Taratra sur 20/08/2019
Lalana sy angovo
Mihemotra indray ny eto an-toerana amin’ny lafiny toekarena raha jerena ny tombanezaka nataon’ny FMI vitan’ny firenena afrikanina mitovitovy fiaingana amin’i Madagasikara. Toa tsy an-dalam-pandrosoana indray fa am-pihemorana aza, raha ampitahana amin’ny vitan’i Etiopia, i Rwanda, ary i Tanzania, telo voalohany aty Afrika Atsinanana.
Tsy nitsaha-nitotongana ny toekarem-pirenena nanomboka teo amin’ny Repoblika faharoa ka hatramin’izao. Fampanantenana hatrany ny nentin’ny mpitondra nifandimby, ary tonga amin’izay fampanantenana izay indray izao ny Politika ankapoben’ny fanjakana naroson’ny praiminisitra ireo solombavambahoaka, ny herinandro lasa teo. Ankoatra izay politika nofaritan’ny fanjakana izay, mbola tototry ny fangatahana ihany koa Atoa Praiminisitra satria maro ny mampikatso ny toekarena, tsy any ambanivohitra ihany fa an-tanàn-dehibe koa.
Koa miandry ny fanjakana hahavita ireo fampanantenana vaovao ireo ny ny vahoaka, raha tsy hilaza afa-tsy ny lalana sy ny angovo. Fototry ny fampandrosoana ireo sehatra roa ireo, miantoka ny fampandehanana sehatra maro hafa. Raha vita ny lalana, ampy ny angovo, azo antoka ny fampandrosoana ny lalam-pihariana maro hatrany amin’ny sosialy, ny fanabeazana, ny fandriampahalemana. Maninona raha ny lalana sy ny angovo no tena ifantohana? Tsy midika akory izany fa atao ambanin-javatra ny hafa.